Tsy nahalevon-kanina… Coca-cola ampiasaina!
Mampitony ny tsy fahalevonan-kanina ny Coca-cola. Raha ampiarahina amin’ny fisotroana rano betsaka sy ny sakafo maivamaivana izy ity dia tena mandaitra tokoa. Araho ary ity torohevitra ity raha hampitony ny tsy fahalevonan-kanina amin’ity zava-pisotro ity.
· Coca-cola iray vera (tsy vonton-katsiaka)
Ø Aroina tsara ny Coca-cola ary asiana siramamy kely mba hampiala ny entona aminy.
Ø Rehefa izay dia araraka ao ny ranom-boasarimakirana ary aroina tsara indray.
Ø Sotroina in-dray mandeha ao anatin’ny tontolo andro ity zava-pisotro ity mba hanampy ny taovam-pandevonan-kanina hiasa.
Ø Tsara marihina anefa fa tsy mandaitra raha ireny karazana Coca-cola tsy misy siramamy ireny.